Yibuphi Ubuchwepheshe Obubulalayo | Martech Zone
Yini i-Technology ebulala
NgoLwesibili, Januwari 17, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lesi yisithombe sevidiyo esimnandi esivela kwaSocialnomics naku-Eric Qualman, umbhali we Umholi Wedijithali: Izihluthulelo ezi-5 ezilula zeMpumelelo Nethonya. Ngiyalikhetha igama ukubulala. Yize imisebenzi eminingi ilahlekile ngezikhathi ezintsha, angingabazi ukuthi kukhona ukwanda kwenani lemisebenzi namathuba. Ngeshwa, sinamandla ezombusazwe nezomnotho azama ukumelana nezinguquko kunokuzivumelanisa nezimo. Ngokombono wami othobekile, lokho kubambezela inqubekela phambili isiyonke yezinto ezintsha.
Kunoma ikuphi, kuyividiyo ejabulisayo enengoma enhle!
Tags: ezokuxhumanaubuchwepheshe buzobulalaividiyo ibulale isiphepho somsakazo
I-PIPA / SOPA: Okuqukethwe kwamahhala kungasibulala kanjani